LibreOffice 7.0.1 inosvika ichitangisa kwakatenderedza 80 kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.0.1 inosvika ichitangisa kutenderera makumi masere
Mwedzi wapfuura, Iyo Gwaro Sisekelo yakakanda kusimudzira kukuru kuhofisi yako. Kunyangwe hazvo yakaunza shanduko dzinoyemurika, chakanyanya kukosha kuseva ndicho chakavandudza kugarisana neMicrosoft Office nekuti, kunyangwe hazvo zvakaoma kuiziva uye kunyange kuzviramba, ndiyo software inoshandiswa kwazvo muhofisi munyika. Maawa mashoma apfuura. TDF yakaburitsa yekutanga yekugadzirisa yekuvandudza mune dzino dzakateedzana, a LibreOffice 7.0.1 , que anosvika pasina nhau dzakanyatsojeka.
LibreOffice 7.0.1 inosanganisira inenge 80 kugadzirisa uye kugadzirisa mune inoenderana gwaro. Gwaro reSiseko rinorangarira kuti isu takatarisana neyekutanga poindi vhezheni yaro yepamusoro, zvinoreva kuti yakaedzwa isingasviki v6.4.6, iyo ichiri kukurudzirwa zvikwata zvekugadzira. FreeOffice 7.0.1, uye ichave yakadai kusvika v7.0.5, inoitirwa isu vedu vanoda mabasa ese tisinganetseke kuti tingawane tudiki tudiki.
LibreOffice 7.0.1 ikozvino inowanikwa, chete kune vashandisi vasingashiviriri
Iyo yekuvandudza ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune yepamutemo webhusaiti iwe yaunogona kuwana kubva pano. Kana iwe ukaedza kuwana iyo yapfuura chinongedzo uye iwe usingakwanise, iva nemoyo murefu; Zvinotaridza sekuti vane matambudziko akasarudzika nemaseva avo, zvisinei nekuti isu tinoedza kupinda neFirefox, Chrome, kana Windows, macOS, uye Linux. Kana iwe uchikwanisa kupinda, vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi avo eDEB mapakeji (Debian / Ubuntu uye zvigadzirwa), RPM (Red Hat, nezvimwewo) kana kodhi yavo kubva ipapo.
Kana iri nguva inosvika mumahofisi epamutemo ekuparadzirwa kwedu kweLinux, zvinoenderana nazvo. Chakajairika ndechekuti LO 6.4.6 inosanganisirwa, asi kune mamwe atoita kuti kusvetuke kuve v7.0. Kana isu tisingade kumirira, yakanaka sarudzo ndeye kuisa iyo flatpak package, kunyangwe nekuda kweizvi isu tichafanirwa kugonesa rutsigiro kana kugovera kwedu kusisina iko kwakagoneswa nekutadza. Iyo inotevera vhezheni ichave yatove a LibreOffice 7.0.2 inouya mukati memwedzi uye zvicharamba zvisingakurudzirwe zvikwata zvekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 7.0.1 inosvika ichitangisa kutenderera makumi masere
Kujekeserwa kuchinyorwa. Matambudziko ekubatanidza ne LibreOffice web domains raive dambudziko kunze kwavo.
Yakanga iri yepamusoro-yekupedzisira ISP dambudziko, saka zvakangoitika mune mamwe matunhu uye nemamwe ISPs.
Izvo zvakaitikawo nemamwe mapeji kunze kweLO.
Uye hazvifanirwe kuitika zvekare nekuti zvakagadziriswa.
Iwo akanakisa eTeregiramu bots, maturusi ayo anozokubatsira iwe kuve unobudirira zvakanyanya
Web Apps Manager, aya ndiwo mashandiro eApp Web Applications akagadzirwa neLinux Mint achashanda